Dekedda Muqdisho oo shaqeyneysa habeen iyo maalin. SAWIRRO – Nabad & Nolol
Ra’iisal wasaare xigeenka oo ay weheliyaan masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Maaliyadda. Wasiirka Dekkedaha iyo Taliyaha ciidanka Booliska ayaa caawa dekedda Muqdisho gudaheeda uga qaybgalay munaasabad lagu maamuusayay dekedda oo shaqeynaysa habeen iyo maalin.
Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa u sheegay ganacsatada soomaaliyeed in dekedda Muqdisho ay shaqeynayso habeen iyo maalin islamarkaasna ganacsatadu ay badeecadahooda kala soo degi karaan habeen iyo maalin.
Wasiirka maaliyadda ayaa tilmaamay in tani horeedayo inaan gaarno isku filnaasho.
Sanad iyo bar ay jirtay dowlada uu hogaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, guulaha la gaaray waxaa ka mid ah in garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo dekedda ay shaqeeyaan habeen iyo maalin, iyaddoo dowladu soo iibisay qalabkii loo baahnaa.